UMnu Mxolisi Miya noNks Sarah Haffenden bophiko lwe-Extended Learning Division benothisha baseVukukhanye oNks Winnie Maphumulo noNks Dineo Seroke.
Uphiko lwase-UKZN i-Extended Learning (i-UEL) izibophezele ukufukamela i-Vukukhanye Educare Centre yase-Chesterville, eThekwini, ngemva kokutapa nokushisa kwangoNtulikazi.
Njengoba lesikhungo besivele sidonsa kanzima ngaphambi kwezibhelu ngenxa yomphumela wobhubhane iCOVID-19, abasebenzi base-UEL banqume ukweseka izingane ezingama-36 ezihlala nezifunda eVukukhanye.
Emnikelweni walo loluphiko lunike ingane ngayinye izijumbana eziqukethe izicathulo zasendlini, amasokisi, izincwadi, izinto zokugeza nezokuziqhola, oncamnce namathoyizi. Leminikelo ithakaselwe kakhulu yizingane nothisha, abakhombise ukubonga kwabo ngokucula nokudansa.
Abasebenzi base-UEL babeka eqhulwini ukuba ngabafundisi abangabaholi abaphokophela ukuletha ushintsho emiphakathini ngokusiza nganoma iyiphi indlela abangasiza ngayo. Lomkhankaso ubungeke wenzeke ngaphandle kokuphosa esivivaneni kwabasebenzi be-UEL, abanikwe ithuba lokuxhasa ingane ngayinye.
Sibonga kakhulu kubaxhasi abasemthethweni Intombi Promotional Gifts ngojosaka, ukudla nezikhwama zezinto zokugeza namathoyizi nakubadayisi bezinto ezenziwe ngocwazi i-SRK ngezikhafutini.
Izimboni zezinkampani zikahulumeni nezizimele, umphakathi nabezindaba bonke banomsebenzi wokusiza abahlwempu uma bengakwazi. Kudingeka kube nokuzibophezela ekuthuthukiseni nasekuvikeleni intuthuko yezingane ngokuletha izidingo lapho zidingeka khona kakhulu ukuletha ithemba ezizukulwaneni zangomuso zaseNingizimu Afrika.
Amagama nesithombe: wuNkosingiphile Ntshangase